2017 – DPNS
“အမျိုးသမီးများဦးဆောင်မှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” နောက်ဆုံးနေ့
December 31, 2017 December 29, 2021 DPNS INFORMATION92
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက စီစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္မွု အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ” ေနာက္ဆံုးေန႔ကို ၂၀၁၇ ဒီဇဘၤာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားမွုမ်ားအားလံုး ပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ (စီေဒါ)ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ရွိသင့္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ခြဲတမ္းစနစ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါတီဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီဝင္အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရၾကည္ ေခ်ာင္းသာ အဂၤပူ လပြတၱာ တံတားဦး ျမင္းျခံ ပြင့္ျဖဴ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဌာနခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လာေရာက္၍ ဂုဏ္ျပဳႏွုတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
“အမျိုးသမီးများဦးဆောင်မှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” စတုတ္ထမြောက်နေ့
December 30, 2017 December 29, 2021 DPNS INFORMATION64
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက စီစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္မွု အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ” စတုတၳေျမာက္ေန႔ကို ၂၀၁၇ ဒီဇဘၤာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားမွုမ်ားအားလံုး ပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ (စီေဒါ)ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါတီဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီဝင္အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရၾကည္ ေခ်ာင္းသာ အဂၤပူ လပြတၱာ တံတားဦး ျမင္းျခံ ပြင့္ျဖဴ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
“အမျိုးသမီးများဦးဆောင်မှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” တတိယမြောက်နေ့
December 29, 2017 December 29, 2021 DPNS INFORMATION103
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက စီစဉ်ပြုလုပ်သည့် “အမျိုးသမီးများဦးဆောင်မှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” တတိယမြောက်နေ့ကို ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အမျိုးသမီးများအပေါ် ခွဲခြားမှုများအားလုံး ပပျောက်ရေးသဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာစာချုပ် (စီဒေါ)ပါ အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ Ebba Kohl ကလည်း ဆွီဒင်နိုင်ငံအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာပုံကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါတီဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများ၊ ရေကြည်၊ ချောင်းသာ၊ အင်္ဂပူ၊ လပွတ္တာ၊ တံတားဦး၊ မြင်းခြံ၊ ပွင့်ဖြူ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်တို့မှ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
အမျိုးသမီးများဦးဆောင်မှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယနေ့
December 28, 2017 December 29, 2021 DPNS INFORMATION84
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက စီစဉ်ပြုလုပ်သည့် “အမျိုးသမီးများဦးဆောင်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” ဒုတိယမြောက်နေ့ကို ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ယခင်နေ့ ဆွေးနွေးရရှိချက်များအား ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ပါတီခေါင်းဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်၌ အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု မြင့်တက်လာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါတီဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
ရေကြည်မြို့နယ် ငသိုင်းချောင်းမြို့ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု ရပ်ကျေးဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ
December 28, 2017 December 29, 2021 DPNS INFORMATION68
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ငသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ကြင္းေပါက္ေက်းရြာအုပ္စု ရပ္ေက်းရံုးခန္းဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲသို႔ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေစာေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္းေကာ္မတီဝင္မ်ား ကြင္းေပါက္ေက်းရြာအုပ္စု ရပ္ေက်းစည္းေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
December 27, 2017 December 29, 2021 DPNS INFORMATION140
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက စီစဉ်ပြုလုပ်သည့် “အမျိုးသမီးများဦးဆောင်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” ပထမနေ့ကို ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲ၌ ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးဇော်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေ မြင့်တက်လာစေရေးသည် အမှန်တကယ် အရေးကြီးသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း ပါတီအနေဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် ကိစ္စများရှိပါကလည်း အစွမ်းကုန် အကူအညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါတီလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု မြင့်တက်လာစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည့် အခြေအနေများ တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲများကို ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးအဖြေရှာခဲ့ကြပါသည်။ဆွေးနွေးပွဲကို ငါးရက်ကြာကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ပါတီဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
“တိုးတက်သော ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု” ၏ သဘောထားကြေငြာချက် (၂၆. ၁၂. ၂၀၁၇)
December 26, 2017 December 29, 2021 DPNS INFORMATION51
တိုင်းပြည်တွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်သော ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုက ၂၆၊ ၁၂၊ ၂၀၁၇ နေ့စွဲဖြင့် သဘောထား ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကျောင်း(YES) အပတ်စဉ်(၄) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား
December 24, 2017 December 29, 2021 DPNS INFORMATION108
လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကျောင်း (YES) အပတ်စဉ်(၄) သင်တန်းဆင်းပွဲကို သင်တန်းကျောင်းတည်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့၌ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဆင်းပွဲတွင် သင်တန်းကျောင်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော် လူ့ဘောင်သစ်လူငယ်ဥက္ကဋ္ဌ ကိုရဲအောင်အေးတို့က ဂုဏ်ပြုအမှတ်တရစကား ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဆင်းပွဲသို့ သင်တန်းသူသင်တန်းသားများနှင့် မိဘဆွေမျိုးများ ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
၈၈ မျိုးဆက်(ပြည်ပ)နှင့် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုများ တွေ့ဆုံပွဲမှ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ၏ ပြောကြားချက်
December 24, 2017 December 29, 2021 DPNS INFORMATION59
၈၈ မျိုးဆက်(ပြည်ပ)နှင့် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုများ တွေ့ဆုံပွဲကို ၂၃-၁၂-၂၀၁၇ တွင် ပြည်လမ်းရှိ ယုဒသန်ခန်းမ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတွေ့ဆုံပွဲတွင် အင်အားစုအသီးသီးက အမှတ်တရစကား ပြောကြားခဲ့ကြရာ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်က လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၈၈ မျိုးဆက်(ပြည်ပ)နှင့် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်
December 23, 2017 December 29, 2021 DPNS INFORMATION98
၈၈ မျိုးဆက်(ပြည်ပ)နှင့် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုများ တွေ့ဆုံပွဲကို ၂၃-၁၂-၂၀၁၇ တွင် ပြည်လမ်းရှိ ယုဒသန်ခန်းမ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတွေ့ဆုံပွဲသို့ ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၁၉၆၀-၆၂ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ၇၄-၇၅ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် အခြေခံပညာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ညီညွတ်ရေးတပ်ဦး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသူများ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ တွေ့ဆုံပွဲတွင် မျိုးဆက်အသီးသီး အင်အားစုအသီးသီးက အမှတ်တရစကား ပြောကြားခဲ့ကြရာ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်က လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]